လှကျော်ဇော ● ဝ တောင်တန်းက လွမ်းပန်းချီ – ဆောင်းပါးအမှတ် (၇) | MoeMaKa Burmese News & Media
ယခုတလော မိုးမခမှာ မောင်စိန်သော်ရဲ့ ၁၉၇၀ – ၈၀ ခုနှစ်များအတွင်းက အရှေ့မြောက်တိုက်ပွဲကြီးများအကြောင်း မှတ် တမ်းတင်ထားတဲ့ဆောင်းပါးတွေ တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီအပတ် အဖတ်အများဆုံးဆောင်းပါးစာရင်းမှာလည်း ပါနေ တာတွေ့လာရတဲ့အခါမှာတော့၊ ကျွန်မမှာ ဝမ်းသာဝမ်းနည်းဖြစ်ရပါတယ်။ သြော် မိုးမခရယ် စောစောလေးကများတင်ရော ပေါ့လို့ စိတ်ထဲမချင့်မရဲလည်း ဖြစ်မိပါတယ်။
ကျွန်မတို့မိသားစု ၁၉၇၆ ခုနှစ် ပါတီထဲရောက်ချိန်ကစလို့ တောက်လျှောက် အလွန်ခင်မင်ရင်းနှီးစွာနေလာခဲ့ကြတဲ့-ရဲဘော် တွေထဲမှာ ကိုနိုင်ဦးပါပါတယ်။ သူက မုံရွာသားဆိုတာသိချိန်ကစလို့ ဖေဖေကအစ ကျွန်မတို့မိသားစုဝင်အားလုံး သူ့ကိုဝိုင်း ချစ်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မတို့မိသားစုမှာ အလွန်ရင်းခဲ့တဲ့ မုံရွာသားများရှိခဲ့လို့ပါ။ ဖေဖေ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးခရီးများထွက်နေတုန်းကရော၊ (၁၉၆၀ ခုနှစ်များ)၊ ဆရာကြီးမှိုင်းဈာပနနဲ့ ဂူဗိမာန်တည်ဆောက်တဲ့ကာလများကရော (၁၉၆၄ – ၆၆) ဖေဖေရဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ရဲဘော်များဖြစ်တဲ့ ဦးတင်ရွှေတို့ ဦးအံ့မောင်တို့ဆိုတာက မုံရွာသားများလေ။
ကိုနိုင်ဦးတို့မိသားစုနဲ့ ကျွန်မတို့တတွေက ပန်ဆန်းကာလ (၁၉၇၈ – ၈၉) တလျှောက်လုံး ဆွေမျိုးရင်းချာတွေလို အတူနေခဲ့ကြ ပါတယ်။ ၁၉၈၉ – ၉၀ ခုနှစ်များမှာတော့ ကန်ပိုင်တီးမှာတပ်ပြန်စုပြီး နိုင်ငံရေးသင်တန်းတွေ စစ်ရေးသင်တန်းတွေ အတူတက် ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကာလတပိုင်း အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပေမယ့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်များမှာတော့ ပြန်လည် အဆက်အသွယ်တွေရခဲ့ကြပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကြီးလွတ်မြောက်ရေးအတွက် သူက နာမည်အမျိုးမျိုး (မောင်စိန်သော်၊ ဗတိုးရှိန်) နဲ့ ဆောင်းပါးတွေရေး၊ ကဗျာတွေရေးနဲ့ ကျွန်မတို့အတွက် တခုတည်းကျန်တော့တဲ့လက်နက် ကလောင်နဲ့ ဆက် လက်တိုက်ပွဲဝင်လာရာမှာ အလွန်ဇွဲနပဲကြီးစွာ အိုခြင်း၊ နာခြင်းတရားတွေကို အန်တုရင်း နောက်ဆုံးမှာတော့ ဘယ်သူမှမ လွန်ဆန်နိုင်တဲ့ သေခြင်းတရားကို မျက်နှာချင်းဆိုင်သွားခဲ့တယ်။ မရှောင်မလွှဲသာတဲ့ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တရားကို လက်တွေ့ရင် ဆိုင်သွားခဲ့တယ်။
ဘယ်လိုလဲ … ကျေနပ်ရဲ့လားလို့။ ဒီတော့ သူက ကျွန်တော့်ကို နှေးနှေးလေးလေးကြီးလို့ ပြောထားတာတဲ့။ မကျေမနပ်ကြီး ပြောပါတယ်။
သူ့ရဲဘော်များက ရေးပေးတဲ့အမှာစာများမှာ သူ့ရုပ်ပုံလွှာ (တစေ့တစောင်း) ကိုတွေ့ရပါတယ်။ မြေယာပြဿနာများစာအုပ်အတွက်ရေးပေးတဲ့ အမှာစာမှာ ရဲဘော်စိုးချစ်က …
လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ ပြောစရာများတယ်။ အစဉ်လိုက်ချရေးပြမယ်ဆိုရင် …
သူ့အိမ်ကို ၃-၄ ရက် တခါရောက်ပါတယ်။ ခု ကူဖော်လောင်ဖက်လေးရလာတော့ ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်ချိန်ပိုများလာတာ တွေ့ရတယ်။ အင်တာနက်တက်ပြီး ဖတ်မှတ်တာတွေ ပိုလုပ်လာနိုင်တယ်။ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာပဲ ကဗျာစပ်၊ ဆောင်းပါးရေး နေတာပါ။ ဒီအခြေအနေကြားက ဒီစာအုပ်ထွက်လာတာပါလို့ ရေးထားတာတွေ့ရပြီး နိဂုံးချုပ်ကလေးကတော့ ….
အဲဒီစာအုပ်အတွက် မောင်လှဝင်း (မြင်းခြံ) ရဲ့အမှာစာမှာတော့ ….
ငါတို့အလေးနီပြုရင်း၊ မြင်လိုက်ရပါပြီ …. တဲ့။
ရဲဘော်နိုင်ဦး ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူပါတော့ ….။